Wararka - Geeddiga geedi socodka granulation qoyan
Kiniiniga ayaa hadda ah mid ka mid ah foomamka qiyaasta daawada ee aadka loo isticmaalo, oo leh soosaarka ugu ballaaran iyo kan ugu ballaaran ee la isticmaalo. Nidaamka kala-soocidda qoyan ee dhaqameed ayaa weli ah habka guud ee soo-saarka daawooyinka. Waxay leedahay habab wax soo saar bisil, tayo wanaagsan oo walxaha, waxsoosaarka wax soo saarka sarreeya, iyo wax taaj oo kale oo wax lagu duubo. Faa'iidooyin wanaagsan iyo kuwo kale, waa tan ugu ballaaran ee loo isticmaalo warshadaha dawooyinka.
Habka wax soo saar ee kiniiniyada guud ahaan waxaa loo qaybin karaa farsamaynta alaabta ceyriinka ah iyo kuwa kaabayaasha ah, miisaamida, xoqidda, qalajinta, isku darka, miisaska, dahaadhka, iwm. Waxaa jira maahmaah ku jirta warshadaha: Kalasooca ayaa ah hoggaamiyaha, miisaska waa udub dhexaadka, Baakiduna waa dabada Phoenix, waa la arki karaa in geedi socodka kala soocida ay door muhiim ah ka ciyaareyso wax soo saarka kiniiniga oo dhan, laakiin sida loo sameeyo qalabka jilicsan iyo helitaanka dhagaxyada, ilaa iyo hadda waxaa jira macno aad u qoto dheer oo ku jira buugaagta "ku haya a kubbadda, taabashada iyo kala-firdhinta ”, Lama faahfaahin. Iyada oo ku saleysan khibrada qoraha ee soo-saarka dhabta ah, qodobkaan wuxuu falanqeynayaa dhowr arrimood oo caan ah oo saameeya xasilloonida hannaanka kiniiniga qoynta kiniinka, wuxuuna soo jeedinayaa tallaabooyin xakameyn habboon oo lagu hubinayo tayada wax soo saarka daroogada.
Daryeelka alaabta ceeriin
Qalabka ceyriinka iyo kaabayaasha guud ahaan waxay u baahan yihiin in la jajabiyo oo la baaro ka hor isku darka qoyan iyo soosaarida granulation. Qaar ka mid ah ifafaalooyinka aan u qalmin ee inta badan ku dhaca habka miisaska, sida isku darka aan sinnayn, kala-goynta, dhejinta ama kala-baxa, iwm, waxay si dhow ula xiriiraan jilicsanaanta ku-filnaanta ee alaabta ceeriin inta lagu jiro daweynta. Haddii alaabada ceyriin ay yihiin dhaldhalaal ama irbado qaabeeya, suuragalnimada leexashooyinka kor ku xusan ayaa noqon doona kuwa iska cad. Shaashadda ku-meel-gaadhka ah, burburin iyo shaandhayn habka dhaqanka guud ahaan waa 80 mesh ama 100 mesh screen, laakiin iyadoo la horumarinayo qalabka iyo tiknoolajiyada alaabta ceyriinka ah, inta badan alaabta ceyriinka ah ee lagu burburiyey shaashadda 80 mesh ee habka dhaqanka. hadda way ka badnaan kartaa 100. Itimaalka ifafaalaha kor ku xusan si weyn ayaa loogu yareeyay budada wanaagsan ee lagu shiiday iyada oo loo marayo miiraha 100-mesh. Sidaa darteed, ganaaxa alaabta ceyriinka ah iyo kuwa kaabayaasha ah iyada oo loo marayo makiinada 100-mesh ayaa si tartiib tartiib ah u beddeleysa geeddi-socodka kala-soocida 80-mesh
Sababta oo ah kororka ama hoos u dhaca miisaanka shay kasta ayaa sababi doona isbeddelada xiga ee xaaladaha kale ee geeddi-socodka, taas oo sababi doonta xasillooni-darrada tayada walxaha, taas oo sababi karta dhibaatooyin taxane ah sida qashin-qaadashada kiniiniga, friability xad-dhaaf ah, kala-goyn gaabis ah ama hoos u dhac kala dirid, markaa mar kasta oo aad quudiso Qaddarka si macquul ah looma hagaajin karo. Haddii ay jiraan xaalado gaar ah, miisaanka culeyska waa in lagu xaqiijiyaa iyadoo la raacayo xaqiijinta nidaamka.
Maalmahan, xawaaraha sare ee isku dhafka qoyaanka granulator waa qalabka ugu badan ee la isticmaalo ee waxsoosaarka granulation. Marka la barbardhigo fiicni dhaqameedka iyo granulator, noocan ah nooca 'granulator' waa xaqiiqda sababta oo ah dhibaatada daawooyinka kala duwan ee la qoro ama raadinta tayada sare. Sidaa darteed, granulator-ka lama baabi'iyo, xawaaraha sare ee isku dhafka qoyaanka qoyan waxaa kaliya loo isticmaalaa isku-darka dhaqanka, ka dibna granules isku-dheelitiran oo dheeri ah ayaa laga helaa isku-darka. Xaaladaha geedi socodka ee saameynaya tayada granules qoyan badanaa waxaa ka mid ah arrimo badan sida heerkulka, qiyaasta, ku darista habka isku xiraha, kicinta iyo goynta xawaaraha granulator, iyo kicinta iyo waqtiga goynta.
Heerkulka xabagta ayaa ah astaamaha ugu miisaanka adag ee la xakameyn karo wax soo saarka kororka ah. Waa wax aan macquul aheyn in si sax ah loo xakameeyo joogtaynta heerkulka ka hor inta aan lagu darin xabagta markasta. Sidaa darteed, noocyada badankood uma isticmaali doonaan heerkulka sida tusmada koontaroolka, laakiin soosaarka dhabta ah, waxaa la ogaaday in heerkulka qulqulka istaarijka uu saameyn weyn ku leeyahay noocyo gaar ah qaarkood. Noocyadan kala duwan, heerkulka wuxuu u baahan yahay in si cad loogu baahdo. Xaaladaha caadiga ah, heerkulku wuu sarreeyaa. Markuu sare udhago adhesionka hoose, ayaa hoos udhaca cadaynta kiniinka; sare u kaca heerkulka slurry istaarijka, hoos udhajinta, iyo sare u kala diridda kiniinka. Sidaa darteed, geeddi-socodka qaarkood ee u isticmaala is-beddelka istaarijka sida wax lagu dhejiyo, heerkulka galka waa in la xakameeyo illaa xad.
Qadarka xiraha ayaa leh saameynta ugu muuqata ee walxaha qoyan, sidaas darteed qaddarkiisa sidoo kale waxaa loo isticmaalaa inuu yahay halbeegga xakamaynta muhiimka ah. Guud ahaan, inta ay le'eg tahay xaddiga isku-xidhka, ayaa ka sarreeya cufnaanta cufnaanta iyo adkaanta, laakiin xaddiga isku-xidhka ayaa inta badan ku kala duwan dufcadaha alaabta ceeriin iyo kaabayaasha ah. Waxaa sidoo kale jiri doona isbedello yar oo ku saabsan farqiga u dhexeeya noocyada kala duwan, kuwaas oo u baahan in lagu ururiyo habka wax soo saarka muddada-dheer sida ay ku kala duwan yihiin. Si loo hagaajiyo cidhiidhiga qalabka jilicsan, inta u dhexeysa qiyaas macquul ah, habka loo kordhinayo qadarka isku-xidhka ayaa ka wanaagsan habka loo kordhinayo waqtiga isku-darka.
Ku urursanaanta koolada
Guud ahaan, hadba inta ay le'eg tahay isku-dheellitirka dhejisku, ayaa sii weynaanaya isugeynta, taas oo aan laga sooci karin qaddarkiisa. Soosaarayaasha badankood ma dooran doonaan inay hagaajiyaan feejignaanta markay helayaan fiirsashada dhejiska marka la xaqiijiyo ka dib, laakiin waxay xakameynayaan waxyaabaha jilicsan adoo hagaajinaya xaddiga xabagta, badanaa isku xidhka Isku-uruurinta wakiilka waxaa loo qori doonaa inay tahay qiime go'an nidaamka qeexitaankiisa iyo looma isticmaali doono in lagu hagaajiyo tayada qaybaha qoyan, sidaa darteed halkan kuma soo celin doono.
Sidee loogu daraa xabagta
U isticmaal mashiinka isku dhafka qoyan ee xawaaraha sare si aad u xoqdo. Guud ahaan, waxaa jira laba siyaabood oo loogu daro xargaha. Mid waa in la joojiyo mashiinka, la furo daboolka granulator, oo si toos ah loogu shubo galka. Sidan oo kale, dhajisku ma fududa in la kala firdhiyo, kala soociduna waa Mararka qaarkood way fududahay in la keeno isku soo ururin maxalli ah oo sarreysa iyo cidhiidhi walxaha aan sinnayn. Cawaaqibta waxay tahay in kiniiniyada la soo saaray ay kala daadsan yihiin ama kala diri karaan farqi weyn; tan kale waa gobolka aan joogsiga lahayn, iyadoo la adeegsanayo qalabka wax lagu rido ee xiraya, furitaanka waalka quudinta, iyo walaaqida. Ku darista geedi socodka, qaabkan quudinta ayaa ka fogaan kara sinaan la'aanta maxalliga ah waxayna ka dhigi kartaa jajabyada mid isku mid ah. Si kastaba ha noqotee, shuruudaha nooca isku-xidhka, naqshadeynta qalabka ama caadooyinka hawlgalka, iwm, waxay xaddideysaa isticmaalka habka labaad ee isdaba-marinta ee wax soo saarka. isticmaal.
Xulashada xawaaraha isku darka iyo xawaaraha jarista
Qaab dhismeedka maaddada jilicsan inta lagu jiro kala-soocidda waxay si toos ah ula xiriirtaa xulashada kicinta iyo jarista xawaaraha xawaaraha sare ee isku dhafka granulator, taas oo saameyn weyn ku leh tayada kansarka, waxayna si toos ah u saameynaysaa tayada kiniiniyada la soo saaray. Waqtigan xaadirka ah, matoorka walaaqaya ee xawaaraha sare ee isku dhafka qoyaanka granulator wuxuu leeyahay laba xawaare iyo qawaaniin xawaare soo noqnoqda oo isbedelaya. Xawaaraha laba-laabku wuxuu u qaybsan yahay xawaare hoose iyo xawaare sare. Xakamaynta xawaaraha isbeddelka soo noqnoqda waxay isticmaashaa xakamaynta xawaaraha gacanta, laakiin xakamaynta xawaaraha gacanta ayaa saameyn ku yeelan doonta qaybaha ilaa xad. Sidaa darteed, xawaaraha sare ee isku dhafka granulator oo leh qawaaniinta xawaaraha soo noqnoqodka guud ahaan wuxuu dejiyaa xawaaraha isku darka iyo waqtiga socda, wuxuuna bilaabaa barnaamijka hawlgalka tooska ah si loo yareeyo farqiga aadanaha. Noocyada shaqsiyeed, beddelka soo noqnoqodka ayaa dhab ahaan wali loo isticmaalaa sidii laba-xawaare, laakiin noocyo gaar ah qaarkood, oo isla waqti isku mid ah soconaya, waxaad kordhin kartaa xawaaraha si aad u hesho qalab jilicsan oo dhexdhexaad ah, si looga fogaado isku-darka muddada-dheer ee ay sababtay qalabka jilicsan oo aad u adag.
Xulashada isku darka iyo goynta waqtiga
Halbeeg geedi socod ah oo saameeya tayada qalabka jilicsan waa waqtiga isku darka iyo xoqidda. Dejinta xuduudaheeda waxay si toos ah u go'aamisaa guusha ama guuldarada geedi socodka kala-soocida. In kasta oo xawaaraha isku darka iyo xawaaraha jeexjeexa lagu hagaajin karo beddelidda soo noqnoqoshada, inta badan xulashooyinka geeddi-socodka ayaa go'an Si loo yareeyo farqiga u dhexeeya, si loo helo qalab jilicsan oo ku habboon, dooro inaad hesho qalab jilicsan oo habboon adoo hagaajinaya waqtiga. Xaaladaha caadiga ah, isku darka gaagaaban iyo waqtiga xoqiddu waxay yareyn doontaa cufnaanta, adkaanta, iyo isku ekaanshaha qaybaha, iyo dildilaaca iyo isku mid ahaanta aan u qalmin inta lagu jiro miiska; isku darka iyo waqtiga xoqitaanka oo aad u dheereeya ayaa sababi doona cufnaanta iyo adkaanta qurubyada Haddii la kordhiyo, waxyaabaha jilicsan ayaa dhici kara inta lagu jiro isku-buufinta kaniiniga, waqtiga kala-baxa ee kaniiniga waa la dheereynayaa, heerka kala-baxaana uma qalmi doono.
Qalabka faalsada iyo farsamooyinka kala-soocidda
Waqtigan xaadirka ah, xulashada qalabka granulating ee kala-soocidda qoyan waxaa loo qaybiyaa granulator-hawleed badan iyo granulator lulid ah. Faa'iidooyinka granulator shaqooyinka badan waa waxtarka sare iyo hawlgalka fudud iyo isticmaalka. Khasaaradu waa farqiga u dhexeeya xaddiga iyo xawaaraha quudinta iyada oo ay ugu wacan tahay quudinta gacanta. , Isku mid ahaanshaha jajabku waxyar ayuu ka liitaa; Faa'iidada nooca kalluunka ee luliddu waa in gunta ay isku mid yihiin, farqiga u dhexeeya qaddarka quudinta iyo xawaaraha quudintu waa mid aad u yar. Faa’iido darrada ayaa ah in waxtarka uu hooseeyo iyo isticmaalka shaashadaha la tuuri karo loo isticmaalo kala furfurka. Rakibaadda waa yara dhib. Cabbirka aan sinnayn ayaa si fudud u sababi kara farqiga inuu ka gudbo xadka. Lambarka mesh iyo xawaaraha shaashadda walxaha oo dhan waa la xakameyn karaa si loo hagaajiyo. Guud ahaan, haddii walxaha qoyan ay adag yihiin, waxaad ka fiirsan kartaa kordhinta xawaaraha, xulashada shaashad ballaaran, iyo yareynta qadarka nafaqada mar kasta. Haddii walxaha firidhsan yihiin, waxaad ka fiirsan kartaa yareynta xawaaraha, xulashada shaashad yar, iyo kordhinta xaddiga quudinta mar kasta. Intaas waxaa sii dheer, xulashada shaashadaha, inta badan waxaa jira shaashado bir bir ah iyo shaashado naylon ah oo laga kala xusho. Marka loo eego waayo-aragnimada soo-saarka iyo sifooyinka qalabka jilicsan, waxaa fiican in la doorto shaashadaha birta ah ee birta ah ee qalabka jilicsan ee jilicsan, iyo qalabka jilicsan ee qalalan. Shaashadda Nylon ayaa aad ugu habboon, iyo nooca granulator ee luliddu sidoo kale waxay tixgelin karaan cidhiidhiga shaashadda rakibidda si ay ula qabsadaan si ay u helaan qaybo ku habboon.
Muuqaalka dareenka ee saameynta qalajinta waa qoyaanka walxaha. Qoyaanka jajabku waa qodob qiimeyn muhiim ah ku leh tayada qaybaha. Xakamaynta macquulka ah ee halbeegga ayaa si toos ah u saameysa muuqaalka iyo xasilloonida kaniiniga inta lagu jiro miiska miiska. Xaaladaha caadiga ah awgood, dhacdooyinka jajabka inta lagu jiro miisaska ayaa la tixgelin karaa inay ku timid qoyaan yar yar, iyo haddii dhegtu dhacdo inta lagu gudajiray miiska, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo inay sababtay qoyaan jajab badan. Tilmaanta xakamaynta ee qoyaanka walxaha ayaa guud ahaan lagu go'aamiyaa bilowga iyada oo loo marayo xaqiijinta geedi socodka, laakiin qoyaanka badanaa way adagtahay in la soo saaro, waana lagama maarmaan in la soo ururiyo xogta lana sameeyo kala duwanaanta xakamaynta qoyaanka. Inta badan hababka dhaqidda dhaqameed waxay adeegsadaan qalajinta karkaraya. Waxyaabaha saameynta ku leh waxaa ka mid ah xuduudaha nidaamka sida cadaadiska uumiga, heerkulka qalajinta, waqtiga qalajinta, iyo culeyska walxaha la qalajiyey. Qoyaanka qaybaha waxaa xukuma falanqeeye qoyaan deg deg ah. Hawl wadeen xirfad leh ayaa soo mari kara waqti dheer. Farsamaynta wax soo saarka, qoyaanka maaddad kasta oo lagu qalajiyo waxaa lagu xakameynayaa inta u dhexeysa, taas oo si wax ku ool ah u hagaajin karta waxtarka wax soo saarka oo si fiican u xakameyn kara qoyaanka. Marka lagu daro waayo-aragnimada muddada-dheer, ilaha xogta aasaasiga ah iyo waqtiga qalajinta iyo heerkulka qalabka qalalan.
Isku uruurinta gunta qallalan
Waxay la mid tahay granulation qoyan ayaa ah in xuduudaha geedi socodka ee saameeya tayada granules qalalan guud ahaan tirada mesh iyo xawaaraha shaashadda granulation oo dhan. Si loo hubiyo soosaarka habsami leh inta lagu jiro miiska, hel inta ugu habboon ee loo qaybinayo cabbirka. Kani waa fursadii ugu dambaysay ee sixitaanka. , Adoo dooranaya meshes kala duwan iyo xawaaraha wareega, waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa qaybaha qallalan. Guud ahaan, markay qurubyadu cidhiidhi yihiin, dooro shaashad yar, oo markay qaybtu jilicsan tahay, dooro shaashad ka weyn. Si kastaba ha noqotee, xaaladaha caadiga ah, tani ma noqon doonto xulasho hanaan bisil. Haddii aad rabto inaad hesho jajab wanaagsan, waxaad weli u baahan tahay inaad barato oo aad hagaajiso habka diyaarinta qalabka jilicsan.
Xuduudaha habka isku dhafan ee saameeya tayada walxaha guud ahaan waa qadarka isku darka, xawaaraha qasiyaha, iyo waqtiga isku qasida. Qadarka isku darka ayaa ah qiime go'an ka dib marka la xaqiijiyo nidaamka. Xawaaraha makiinada ayaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato socodka mashiinka isku dhafka dartiis qalabka oo xiran awgeed. Isku mid ahaanta isku dhafka ayaa u baahan kormeerida qalabka qalabka iyo xaqiijinta xilliyada qalabka ka hor inta aan la soo saarin. Si loo hubiyo isku mid ahaanshaha walxaha illaa inta ugu badan oo la helo alaab tayo leh oo isku mid ah, waxaa lagama maarmaan ah in la helo waqti isku dhafan iyada oo loo marayo xaqiijinta nidaamka. Waqtiga isku dhafan ee kufilan waa dammaanad wax ku ool ah oo lagu hubinayo heerka firidhida saliida ee qaybaha qallalan, haddii kale saliiduhu wuxuu sameyn doonaa kooxo xayeysiis koronto ku shaqeeya inta lagu jiro isku darka qurubyada qalalan, taas oo saameyn ku yeelan doonta tayada qaybaha.